हाम्रो जीवनमा यौनको धेरै ठुलो महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । जीवनलाई अत्यधिक सन्तुलित र सुन्दर बनाउन यौन र रोमान्सले ठुलै महत्व राख्दछ । यसका बारेमा राम्ररी ज्ञान लिनु वा जान्नु अत्यावश्यक र जरुरी पनि छ ।
विद्यालयमा जीव विज्ञानको विषयमा पढेको वा त्यस्तै अश्लिलहरु देखेपछि जीवनमा जुन जानकारी मिल्छ त्यो भन्दा सेक्स अथवा धेरै नै भिन्न रहेको छ ।
आज हामी त्यही विषयमा धेरै विज्ञहरुको अनुभवको आधारमा केही कुरा बताउन गईरहेका छौँ, जसलाई तपाईहरुले पनि सेक्सका दौरान बन्देज गर्नुहुने छ ।
आफुलाई मात्र सहजता नखोज्नुहोस्,पार्टनरको पनि चाहना बुझ्ननुहोस
सेक्सका दौरान आफूले चाँहेजस्तो मात्रै नगर्नुस् । पार्टनरको चाहनालाई पनि पूर्ण रुपले स्थान दिनुस् । यसो गर्दा तपाइको पार्टनरले सन्तुष्ट र आरामदायी महसुस गर्नेछिन् । वत्ति अन राख्ने वा निभाउने, कुन पोजिशन अपनाउने, सेक्स टोयको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने यी सबै कुराका बारेमा आफ्नो पार्टनरसँग सल्लाह गर्नुस् ।
उत्तेजक कुरा नगर्नुस्
सेक्सका दौरान महिलाहरु भावनात्मक सम्बन्ध राख्न चाहने बताइन्छ । तर, यथार्थमा उनीहरु ‘एक्शन’मा विश्वास गर्छन् । धेरै कुरा गरेर तपाई त आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ तर, यो कुराले ध्यान भने परिवर्तन हुन्छ । भावनात्मक रुपमा नजिक हुन एक वा दुई शब्द भए पुग्छ बाँकी तपाईको एक्शनको आवश्यकता हुन्छ ।
पार्टनरलाई वेवास्ता नगर्नस्, भावनात्मक रुपमा नजिक हुनुस्
शारीरिक रुपमा त तपाई आफ्नो पार्टनरलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न । तर, उनलाई यो पनि महसुस गराउनुस् कि उनको भावनालाई तपाई वेवास्ता गरिरहनु भएको छैन् । उनको इच्छा, चाहना तथा प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्नुस् र महसुस गराउनुस् कि उनी मात्रै एक हुन् जो तपाईलाई आवश्यक छ ।
तुरुन्त नुहाउनका लागि पार्टनरलाई एक्लै नछोड्नुस्
सामान्यतया सेक्स गरिसकेपछि तपाईलाई नुहाउने इच्छा हुन्छ । तर, तपाई सेक्स गरिसकेपछि तुरुन्त नुहाउनका लागि बेडबाट उठ्नुभो भने यसबाट तपाईको पार्टनरमा गलत सन्देश जानसक्छ । बडी फ्लूड भलै इरिटेड गर्नसक्छ तर, पार्टनरलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, त्यसैले यस्तो नगर्नुस् । यसको सट्टा आफ्नी पार्टनरसँग ‘शावर सेशन’मा जानसक्नुहुन्छ । जहाँ एकसाथ दुई काम हुनसक्छ ।
पुरुषोत्व शक्ति नदेखाउनुस्
यो कुनै खेल होइन् र तपाईको पार्टनर तपाईको प्रतिद्वन्द्वी पनि होइन् जसमा तपाईले पहिला खेल खतम गर्न जरुरी छ । ती पललाई टिकाउ बनाउने कोसिस गर्नुस् ताकि पार्टनरले पूर्ण रुपमा सन्तुष्टि पाओस् । यदि तपाई शीघ्रपतनको सिकार हुनुहुन्छ भने आफ्नो ध्यान डाइभर्ट गर्नुस् । यसले तपाई लामो सम्बन्धमा समयसम्म टिकिराख्नुहुन्छ ।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४११:५२
पुरुषमा मात्र नभई महिलामा पनि साइबर सेक्सको लत ! के हो साइबर सेक्स ?
यस्तो छ मकै खानुको फाईदै फाईदा , क्यान्सर जस्तो गम्भिर रोगबाट पनि बच्न सकिने
अनुहारको छालामा चमक चाहानु हुन्छ ? दैनिक ५ मिनेट समय छुट्याउनुहोस् ।
दुब्लो पातलो भएर तनाबमा हुनुहुन्छ? केहि दिनमानै तौल बढाउन के खाने?के नखाने?